သ၀န်တိုတတ်သောခင်ပွန်းက နေအိမ်ကိုဓာတ်ဆီလောင်းမီးရှို့ပြီး ဇနီးဖြစ်သူအားဖက်၍သေဆုံး
May 31, 2019 Cele Love 0
သ၀န်တိုတတ်သောခင်ပွန်းက နေအိမ်ကိုဓာတ်ဆီလောင်းမီးရှို့ပြီး ဇနီးဖြစ်သူအားဖက်၍သေဆုံး ဖားကန့်မြို့နယ်တွင်ခင်ပွန်းဖြစ်သူကဇနီးအားအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်သည်ဟုပြောရာမှစကားများရန်ဖြစ်ကြပြီးနေအိမ်မီးရှို့ကာ လင်မယား ၂ ဦးလုံးသေဆုံးသွားကြောင်း သိရပါ တယ် …။ ဖြစ်စဉ်မှာကချင်ပြည်နယ်၊ဖားကန့်မြို့နယ်၊ဘွမ်ဘရာကုန်းကွက်သစ်၊ရပ်ကွက်(၁)၊ဆိပ်မူကျေးရွာနေဦးစောမောင်သိန်း၊(၆၅)နှစ်သည်မေလ၃၀ရက်၊နံနက်၆နာရီခွဲခန့်ကဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ယိန်းမျှော်၊(၃၈)နှစ်နှင့်စကားများရန်ဖြစ်ရာမှကြိုးတုပ်၍နေအိမ်ကိုဓာတ်ဆီလောင်းမီးရှို့ကာ နှစ်ဦးလုံးဖက်ပြီးသေဆုံးသွားကြောင်း ဆိပ်မူရဲကင်းမှ သိရ ပါ တယ် …။ “လင်မယားချင်းက အသက်ကအများကြီးကွာတယ်။ မိန်းမက ငယ်ငယ်ချောချောလည်းဖြစ်သလိုအိမ်ထောင်ရေးကိစ္စတွေ ဖောက်ပြန်တယ်လို့လည်းကြားရတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုသူတို့လင်မယားတွေစကားများရန်ဖြစ်ကြတယ်။ အခုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ သူတို့ လင်မယားက […]
ည ၉ နာရီတွင် အိမ်ထောင်ရှိ အခြား အမျိုးသားနဲ့ အတူဖောက်ပြန်နေတဲ့ ဇနီးကို အမိဖမ်း ဇနီးဖောက်ပြန်နေကြာင်း သိရှိပြီး စုံစမ်းရာ ည ၉ နာရီတွင် အိမ်ထောင်ရှိ အမျိုးသားနဲ့ အတူရှိနေချိန် ဖမ်းမိ ဇနီး/ခင်ပွန်းရှိလျက် အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်သည့်သူများအား အရေးယူထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ထားပါ […]
နေ့ချင်းညချင်း “သွား” ဖြူလာစေဖို့ မဖြစ်မေန လုပ်သင့်တဲ့ နည်းလမ်း (၃)မျိုး
နေ့ချင်းညချင်း “သွား” ဖြူလာစေဖို့ မဖြစ်မေန လုပ်သင့်တဲ့ နည်းလမ်း (၃)မျိုး အပြုံးတိုင်းကို ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ ပြုံးနိုင်ဖို့အတွက် သွားဖြူနေဖို့လိုပါတယ်။ သွားဖြူနေဖို့အတွက် သွားတိုက်ဆေး ကိုပဲ အားကိုးနေလို့မရပါဘူးနော်။ ဒီလို သဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့ သွားဖြူအောင်လုပ်နိုင်ရင်တော့ နေ့ချင်းညချင်းကို အပြုံးလှလှလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်သွားရမှာပဲ ဖြစ် ပါ တယ်နော် …. […]
ဖုန်း အလွန်အကျွံသုံးလို့ ဖြစ်သွားတဲ့ (၄) နှစ်သမီးလေးရဲ့ စိတ်မကောင်းစရာ ဖြစ်ရပ် ကလေးမိဘများ သတိထားကြဖို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.. (၁၊ ၅၊ ၂၀`၉) ApannPyay စမတ်ဖုန်း အလွန်အကျွံသုံးလို့ မျက်လုံးအမြင်ချို့ယွင်းသွားရတဲ့ (၄) နှစ်သမီးလေး ကြိုးမဲ့လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေဟာ ယနေ့ခေတ် လူ့ဘောင်မှာ မရှိမဖြစ်သုံးနေရတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ […]
အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတာကြောင့် ပြန်နွှေးမစားသင့်တဲ့ အစားအစာ ( ၇ ) မျိုး… ကျွန်တော်တို့မှာ စားကြွင်းစားကျန်များကျန်ရှိလျှင် အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာဆိုရင် ၂ကြိမ်၃ကြိမ်နွေးပြီး ပြန်စားတတ်ကြပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ တစ်ချို့ အစားအသောက်များဟာ ပြန်နွေးပြီးနောက် စားဖို့ဘေးကင်းသော်လည်း တစ်ခြားအစာများဟာ ဘေးမကင်းဘဲ ကျွန်တော်တို့ကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ကျန်းမာသောအစားအစာတချို့ကို ပြန်နွေးတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ […]
အသည်းကွဲပြီးနောက် ဝိတ်ကျအောင်ကြိုးစားကာ လေယာဉ်မယ်ဖြစ်လာတဲ့ မိန်းကလေး
အသည်းကွဲပြီးနောက် ဝိတ်ကျအောင်ကြိုးစားကာ လေယာဉ်မယ်ဖြစ်လာတဲ့ မိန်းကလေး အသည်းကွဲတယ်ဆိုတာ ဆိုးရွားတဲခံစားချက်တစ်ခုပါ။ မရင့်ကျက်သေးတဲ့အရွယ်မှာဆိုရင် ပိုတောင်ခံစားရပါ သေးတယ်။ Que Huong လို့နာမည်ရတဲ့ ဗီယက်နမ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတော့ သာယာတဲ့သမီးရည်းစား ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့ သူမရဲ့ရည်စားဖြစ်သူက သူမကို ရုတ်တရက်စွန့်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ သူမသိခဲ့ရတာကတော့ သူမရဲ့ရည်စားဟာ သူမထက်ပိုချောတဲ့ ရည်းစားသစ်တစ်ယောက် ရှိနေလို့ […]
ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို အောင်မြင်အောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ မိန်းမ “၁၀” မျိုး ယောကျာ်းတစ်ယောက် အလုပ်ကိုင် အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ ငယ်ရွယ်စဉ်က သူတို့ရဲ့မိခင် ၊ ဖခင်တွေက အဓိက ပံ့ပိုးမှုတွေ ပေးခဲ့ရတာပါ ။ဒါပေမဲ့ အိမ်ထောင် ရက်သား ကျလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ လက်တွဲဖေါ်ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုဟာ ပိုပြီးအဓိက ကျသွားပါပြီ […]
သားမယားပြုခြင်းကို ခံခဲ့ရသည့် (၇)တန်းကျောင်းသူမိန်းကလေးရဲ့ဘဝပေးအခြေအနေ
သားမယားပြုခြင်းကို ခံခဲ့ရသည့် (၇)တန်းကျောင်းသူမိန်းကလေးရဲ့ဘဝပေးအခြေအနေ မင်းဘူးခရိုင် စလင်းမြို့နယ် ပေါက်လေးပင် အုပ်စု လက်ပန်ဦး ကျေးရွာမှ အသက်(၁၄)နှစ် အရွယ် (၇)တန်းကျောင်းသူမိန်းကလေး။ ကံအကြောင်း မသင့်၍ယုတ်မာသူတစ်ဦး၏သားမယားပြုခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ယုတ်မာသူလည်း ထောင်ကျသွားသည်။ယုတ်မာသူ၏ ဘဝနိဂုံးချုပ်ခဲ့သော်လည်း …. မိန်းခလေးတွင်တော့ယုတ်မာသူ၏ သွေးသားကကျန်ခဲ့သည်။ သောကြာနေ့နံနက်တစ်နာရီမှာ အမွှာညီအစ်မကိုမွေးသည်။မိန်းခလေးကို ဘာဆက်လုပ်မလဲမေးတော့သမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုကြီးပြင်းအောင်မွေးမည်ဟုပြောသည်။သူမ၏ သမီးနှစ်ဦးကို သူတစ်ပါးသို့မွေးစားရန်မပေးနိုင်ကြောင်း။ […]
အသက် ၆၃နှစ်လို့ မထင်ရက်အောင်နုပျိုနေတဲ့ ထိုင်ဝမ်အမျိူးသမီးပြောပြတဲ့ အလှအပ လျှိူ့ဝှက်ချက်… အိမ်တွင်းအလှဆင်ဒီဇိုင်နာတစ်ဖြစ်လဲ ဖက်ရှင်ဘလော့ဂါဖြစ်သူ Lure Hsu (၄၁နှစ်) ဟာ သူမရဲ့အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ငယ်ရွယ်နိုပျိုမှုကြောင့်ပုရိသများအကြား ရေပန်းစားလျက်ရှိနေပါတယ် သူမတို့မိသားစုထဲမှာ သူမလိုပဲအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်နုပျိူနေသူတွေ ရှိနေသေးတာကြောင့် လူတွေပိုအံ့အားသင့် စေခဲ့ ပါ တယ် ……။ ဒါကတော့သူ့ညီအမ၂ယောက်ဖြစ်တဲ့ Fayfay(41 years) […]
မြန်မာလူမျိုးတွေက အောက်တန်းစားတွေလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့ ရိုတ
မြန်မာလူမျိုးတွေက အောက်တန်းစားတွေလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့ ရိုတ ရိုတဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအကြာကတည်းက အနုပညာလောကထဲဝင်ရောက်ခဲ့တာကြာပြီဖြစ်ပြီး မကြာသေးမီက ပွင့်နဒီမောင်နဲ့အကြမ်းစားရိုက်ထားခဲ့တဲ့ Your Smile သီချင်းMTV နဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့သောင်းသောင်းဖျဖျဝေဖန်မှုတွေကြားမှာ ဂယက်တွေထပြီးပြန်လည်နာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီက ရိုတက Stun Magazine နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ လက်ရှိအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းနဲ့မြန်မာတွေအပေါ်သူမြင်တဲ့အမြင်ကို ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ ရိုတက နောက်ပိုင်းမှာ ညစ်ညမ်းမှုကိုအသားပေးတဲ့ […]